IVeloren: I-Open Source Video Game Ikhuthazwe yiCube World | Kusuka kuLinux
UVeloren: umdlalo wevidiyo ovulekile ophefumulelwe yiCube World
I-Veloren kuyisihloko somdlalo wevidiyo ovulekile othakazelisayo. Kususelwa kuCube World, ngesitayela somhlaba esivulekile kakhulu esihlanganisa nengqikithi ye-RPG. Imahhala ngokuphelele, futhi iyahambisana neWindows, Linux ne-MacOS,
Ngokuqondile kunguqulo yayo yakamuva okwamanje, ukuxhaswa kohlelo lokusebenza lwe-Apple kungeziwe. Futhi njengoba ungacabanga ngemidwebo yayo, ayidingi ezimbalwa izinsiza inamandla kakhulu okunyakaza. Kulokhu, ingasebenza kahle nganoma iyiphi i-GPU esekela i-OpenGL 3.2 noma ngaphezulu, i-4GB ye-RAM, i-CPU eningi, kanye ne-2GB yesikhala samahhala ku-hard drive yakho.
Umdlalo wevidiyo wenziwe kusetshenziswa i- Ulimi lokugqwala, esiya ngokuya sithandwa kakhulu ngokubhala amaphrojekthi wesoftware. Babheke kuCube World and Legend of Zelda: Breath of the Wild ukuthola ugqozi.
Okwamanje isisesigabeni sokuqala sentuthuko, nge izinhlobo 0.x njengoba ubona. Ngakho-ke, kuningi okusamele kwenziwe ngcono, yize sekuvele kuyasebenza futhi ungakuzama.
Ekukhishweni kwakamuva kukhona ukuthuthuka okuhle njengohlelo lomculo, imephu encane ethuthukisiwe ongakwazi ukusondeza futhi ujikeleze, amafonti nezinkinobho eziguquguqukayo, izilungiselelo ze-gamma, imiphumela emisha yomsindo, izithombe ezintsha zokuhlasela, uhlelo lokulawula izikhali, ukuthuthukiswa kokusekelwa kwephedi yemidlalo, njll.
Kuzo zonke lezi zici, uVeloren ube ngesinye sezihloko ze- imidlalo ethembisayo evulekile yomthombo ovulekile phakathi kwazo zonke ezikhona njengamanje. Iqiniso ukuthi libukeka lihle kakhulu, futhi ungazibonela ukuthi yini ongayenza ngalo mdlalo. Yini ongalahlekelwa yiyo? Kumahhala, ngakho-ke ngiyakumema ukuthi uyizame ku-distro yakho oyithandayo… Futhi, iphakethe lilinganisa cishe i-99,9MB kuphela futhi liyatholakala nge-64-bit Linux.
Ukulanda - Mahhala
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Imidlalo » UVeloren: umdlalo wevidiyo ovulekile ophefumulelwe yiCube World
Angikwazi ukuphatha leso sitayela semidwebo, ngiyabona nje futhi kungenza ngithukuthele, noma ngabe yini umdlalo.
I-Winget, umphathi omusha wephakheji ovulekile owenziwe yi-Microsoft
I-Tryton 5.6 ngentuthuko kumamojula, ukuthekelisa, isikhombimsebenzisi sewebhu nokuningi